Caalamka, 06 January 2018
Sabti 6 January 2018
Sacuudiga: Mushaharka Shaqaalaha oo la Kordhinayo.
Boqorka Sacuudiga ayaa amray in kordhiyo lacagaha gunnooyinka lagu siinayo shaqaalaha dawladda, waxaana amarkan yimid maalmo ka dib markii dawladdu ay sheegtay in cashuuro la saari doono badeecadaha qaarkood, iyada oo sidoo kalena la joojinayo kabiddii ay dawladdu kabi jirtay shiidaalka.
Trump oo ku hajnabay in gar gaarka lacageed uu ka jari doono Falastiiniyiinta
Kadib markii uu garowsaday in isku deygiisa ahaa in uu nabad ka dhex dhaliyo bariga dhexe uu meel gebi ah ka dhacayo, ayuu madaxweyne Donald Trump, waxa uu Taladadii ku hanjabay in uu jari doono lacagaha gar-gaarka ah ee uu Mareykanku siiyo maamulka Falastiiniyiinta.
Kim Jong Un oo u hanjabay Mareykanka
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa sheegey in Mareykanka ay tahay in uu aqoonsado in barnaamijka Nugliyerka ee dalkaasi uu yahay mid dhab ah.
Dhacdooyinka Caalamka ee Sanadka 2017
Waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan waxyaabihii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka 2017ka, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed
Dowladda Ruushka oo Go'aanka Madaxa Mucaaradka Shacidarro ku Tilmaantey
Qarax Kadhacay Kaabuul oo ay Askar iyo Shacabba ku Dhinteen
Mareykanka oo Dib u Bilaabaya Fiisa BixintaTurkiga
Safaaradda Mareykanka ee dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ay dib u billaabeyso bixinta fiisaha ay siiso muwaadiniinta Turkishka ah, kaddib markii uu xirnaa adeegani ku dhawaad muddo saddex bilood ah.
Xuutiyiinta oo Gantaal Kale Ku Riday Sacuudiga
Wasaaradda Difaaca Sacudiiga ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal ay malleeshiyaadka Xuutiyiinta dalka Yemen maanta oo Talaada ah ku tuureen magaalada Riyadh ee caasimada Sacuudiga.
Laba Todobaad Kadib Dilki Cali Cabdalla Saalax waa Sidee Xaalka Yemen?
Laba todobaad ayaa kasoo wareegatay marki la dilay madaxweynihi hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax.
Erdogan: Safaarad ayaan ka furan doonnaa Bariga Qudus
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Axadi maanta sheegay in Dowladiisu rajeyneyso in ay safaarad ka furato caasimada Falastiin ee Bariga Qusus, mustaqbalka.
Wariyeyaal Lagu Xiray Myanmar
Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay xarig Talaadadi lasoo dhaafay loogu geystay dalka Myanmar laba wariye oo ka tirsan wakaalada wararka Rueters.
Ururka Islaamka oo Qudus u Aqoonsaday Caasimadda Falastiin
Magaalada Istanbul ee Turkiga waxaa lagu soo gababeeyey shir madaxeedka waddamada Islaamka, kaas oo magaalada Qudus ay madaxdii shirka ka qeyb gashay ugu aqoonsadeen magaalo madaxda mustaqbalka ee Falastiin